Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0612 tal
Ny nanirahana an'i Timoty (1 Tes 3:1-5)
Talata 07 Aog.
Vakio ny 1 Tes. 3:1–5 sy ny Mat. 24:9–22. Tontolon-kevitra inona no nametrahan’i Paoly ny fahorian’ny Tesalônianina sy ny fahoriany?
Nalahelo mafy tokoa i Paoly noho ny naha-tafasaraka azy tamin’ireo Tesalônianina ka nanapa-kevitra izy ny haniraka an’i Timoty ho any Atena mba hamantatra ny zava-nisy tany amin’izy ireo. Noho ny alahelony azy ireo dia naleony nisaraka tamin’i Timoty toy izay tsy nahare vaovao momba ny fandrosoan’izy ireo.
Koa satria ny ho iraka, na solon-tenan’i Paoly, no antony nanirahana an’i Timoty dia nanao izay rehetra azony natao i Paoly mba hampiorenana ny fahefan’i Timoty teo amin’ny fiangonana. Nambaran’i Paoly àry fa i Timoty dia “rahalahiny”, “mpanompon’Andriamanitra” sady mpiara-miasa “amin’ny filazantsara”. Ny dikan-teny grika sasany dia milaza mihitsy fa “mpiara-miasa amin’Andriamanitra” i Timoty. Toerana ambony tokoa izany. Fantatr’i Paoly fa ho sarotra ny iraka nankinina tamin’i Timoty, koa nataony izay rehetra azony natao mba hanokafana ny lalana ho an’i Timoty ka horaisin’izy ireo tahaka ny tenany ihany izy rehefa tonga.
Ny and. 3 sy 4 no ahafahantsika mahatakatra ny tian’i Paoly holazaina tamin’ny Tesalônianina raha afaka namangy azy ireo ny tenany. Ireo teny nampiasaina dia nofantenana mba hanoritana fa ny fahorian’izy ireo dia mitovy amin’ny zavatra hiseho amin’ny andro farany, araka izay voalazan’ireo andalan-teny toy ny Mat. 24:9–22. Tsy tokony hatao mahagaga ny fahoriana. Isika rehetra dia samy efa nampitandremana ny amin’izany.
Ny fahorian’ny Kristianina dia mamoha ao an-tsaina ny toe-javatra hiseho amin’ny andro farany; amin’izay fotoana izay mantsy dia hiharan’ny fanenjehana ireo tena mpanara-dia an’i Kristy marina (jereo ny Apôk. 13:14–17). Rehefa mihatra tokoa ny fahoriana, dia tokony ho takatsika fa fahatanterahan’ny faminaniana izany, ary mankahery fa tsy mahaketraka antsika. Ny tanjona kendren’ny faminaniana dia tsy ny hanome fahafaham-po ny fitia te hahalala ao anatintsika momba ny hoavy, fa ny hanome antoka mafy orina eo anivon’ny fihaikana izay atrehintsika isan’andro.
Ambaran’i Paoly eo amin’ny and. 5 fa misy antony hafa koa ny nanirahany an’i Timoty. Nanahy izy andrao dia very ny finoan’ny Tesalônianina noho ny zava-tsarotra izay natrehin’izy ireo. Nanahy izy andrao dia nandamoka ny asa notanterahiny tany Tesalônika.
Inona no azontsika atao, isan’andro, mba hiomanantsika ara-panahy hiatrika ireo fisedrana izay tsy maintsy hatrehintsika eo amin’ny fiainantsika?